गाई हत्या प्रकरणः सुर्खेतलाई डम्पिङ साइड बनाइएको सांसदको आरोप
छानविन समिति गठन गर्न सांसदको माग
सुर्खेत - गत साता सुर्खेतमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले दैलेखका लागि भनि पठाएको २९१ ओटा गाई मध्ये ३७ गाईको हत्या गरिएको प्रसंगले प्रदेश सभामा प्रवेश पाएको छ ।
उपमहानगरले दैलेखका लागि भन्दै पठाइएको गाई सुर्खेतमा भीरबाट खसालेर हत्या गरिएपछि प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारसँग छानविन समिति गठन गर्न माग गरेका हुन ।
नेकपा सचेतक सीता नेपालीले सुर्खेतलाई बाँके र दैलेखले डम्पिङ साइड बनाएको बताइन् । ‘दैलेखको जिल्ला समन्वय समितिले गाई मगाएको तर उपमहानगरपालिकाले कटकुवालगायतका स्थानमा दायाँतर्फ गाईलाई खसालेर हत्या गरिएको छ,’ उनले भनिन, ‘के गर्न खोजिएको हो ? डम्पिङ साइड त बनाउन भएन नी ?’ उनले बाढीपीडितहरूलाई तत्काल पालबाट बाहिर ल्याउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
प्रदेश सभा सदस्य पदमा खड्काले गाई हत्या गरिएको स्थान उत्तरी जलाधार क्षेत्र भएको र त्यहाँको पानीको मुहान हत्या गरिएका गाईका कारण दुर्गन्धित भई महामारी आउने सम्भावना भएको बताइन् ।
उनले सुर्खेती जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने अधिकार कसैको नभएको बताइन् । उनले दैलेख जिल्ला समन्वय समितिले लेखेको पत्रमा षडयन्त्र भएको बताउँदै त्यसको छानविन हुनुपर्ने बताइन् । उनले सरकारले एक विज्ञप्तीसम्म किन निकाल्न किन सकेन भन्दै प्रश्न गरिन् ।
सांसद विन्दमान विष्टले नेपालगञ्ज देखी कटकुवासम्म गाई ल्याउँदा प्रहरीले के हेरेको थियो भन्दै प्रश्न गरे । ‘गाडीको रुट परमिट नै नभएका गाडीलाई कसले कसरी अनुमति दियो ? बुढा गाईगोरु कुन स्वार्थका लागि मगाइएको हो ? तत्काल छानविन समिति गठन गरि दोषीलाई कारवाही गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
सांसद गोपाल शर्माले गाई हत्या गरेर मात्रै यस्तो घटना सार्वजनिक भएको बताउँदै यस्ता तस्करी धेरै हुने गरेको उनको आरोप छ । उनले यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै रुकुम पश्चिममा तत्कालीन जनसत्ताले घर जग्गा रजिष्ट्रेसन गरी कर लिएको र खरिद विक्री गरेको स्मरण गराए ।
‘तर अहिले उनीहरूले लालपूर्जा पाउन सकिरहेका छैनन् । ५ सय व्यक्ति यस प्रकरणका काण तनावमा छन्,' उनले भने, ‘अहिले उनीहरूलाई कि बढेको मूल्य देउ की जग्गा खाली गर भन्ने धम्की आइरहेको छ । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल पहल गरोस् ।’
सांसद र मन्त्री भ्रष्ट बहादुर !
प्रदेश सभा सदस्य कुमृराज शाहीले गाउँमा सरकार र संसदहरूलाई भ्रष्ट बहादुर र लुटबहादुरको संज्ञा दिन थालिएको बताए । कर्णाली राजमार्गमा खाल्डै खाल्डा हुँदा, राजधानीकै सडकको अवस्था दयनीय हुँदा जनताले यस्तो आरोप लगाउने गरेको उनको भनाइ थियो । सरकार र माननीयले योजनाको नाउँमा पैसा पचाउने गरेको आरोप लागिरहेको बताउँदै सांसद शाहीले यसबारेमा सरकार सजग रहनुपर्नेमा जोड दिए ।
पैसा उठाउन सांसद र मन्त्री आए
नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीका दश जिल्लामा सांसद र मन्त्री जाँदा पैसा उठाउन आएको भन्ने हल्ला चलिरहेको बताए ।
‘विभिन्न उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, उनीहरूले काम गर्ने, भ्रष्टाचार उनीहरूले गर्ने तर हाम्रो नाम बेचेर कमाउ धन्दा गर्नेहरूले गलत प्रचार गरिरहेका पाइयो,' उनले भने, ‘प्रतिपक्ष मौन भएको आरोप समेत लगाइएको छ ।’
यस्तो प्रचारका बारेमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको जिकिर थियो । उनले रुकुम पश्चिम, कालिकोटलगायत अधिकांश जिल्लामा प्राविधिकसँग मिलेर उपभोक्ता समितिले लाखौं बजेट दुरुपयोग गरेको बताउँदै यसतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयले छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
‘असार १५ मा उपभोक्ता समितिसँग कामको सम्झौता गरिएको छ,' उनले प्रश्न गरे, ‘असार मसान्तमा अर्थात १० दिनमै सबै भुक्तानी किन र कसरी दिइएको हो ?’
उनले हुम्ला लगायतका हिमाली जिल्लामा पहिले कर्मचारीलाई दुःख दिन पठाउने गरिएको स्मरण गर्दै गौ हत्या प्रकरणमा पनि त्यस्तै भएको बताए । ‘जिसस दैलेख, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गाई लिने, लैजाने विषय एकै दिन कसरी सम्भव भयो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कि पुरै डिजीटलाइज्ड भइसकेका हौं हामी ?’
आठवटै संक्रमितको 'कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ' सकियो, परीक्षणक...
विदेशमा रहेका नेपालीलाई डा. पाण्डेको मर्मस्पर्शी अपील : सामान्य रुघाखोकीसँग डर नमान्नुहोला
लकडाउन उल्लंघन गर्ने १ हजार ३ सय मानिस प्रहरीको कारबाहीमा
स्वास्थ्य सामग्री किन्‍न सेना र विभाग दुवैको प्रक्रिया शुरू